Suzi Shapiro si Martech Zone |
Edemede site na Suzi Shapiro
CX / UX - Naanị otu leta dị iche iche? Ọ dị mma, karịa otu leta, mana enwere ọtụtụ myirịta dị n'etiti Ọrụ Ndị Ahịa na Ọrụ Ahụmịhe Onye Ọrụ. Ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na-elekwasị anya ịmụ banyere ndị mmadụ site na nyocha! Myirịta nke Ahụmịhe Ndị Ahịa na Ahụmịhe Ndị Ahịa na Onye Ọrụ na Ebumnuche Onye Ọrụ na usoro na-adịkarị. Ha abụọ nwere: Echiche nke azụmahịa abụghị naanị maka ire na ịzụrụ, kama ọ bụ maka mkpa na-egbo afọ na inye uru